सिन्धुलीमा जिप दुर्घटना, ५ को मृत्यु, ७ घाइते (मृतक र घाइतेकाे नाम समेत) | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सिन्धुलीमा जिप दुर्घटना, ५ को मृत्यु, ७ घाइते (मृतक र घाइतेकाे नाम समेत)
प्रकाशित मिति २४ माघ २०७५, बिहीबार १४:५७ लेखक नेपाली जनता
सिन्धुली । मध्येपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–२ चण्डीभञ्ज्याङमा डबलक्याप बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य ७ जना घाइते भएका छन् ।
जिल्लाकै महादेवडाडाबाट १२ जना यात्रु बोकेर सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीतर्फ आउँदै गरेको बा १५ च ९४२२ नम्बरको जिप बिहान १० बजेतिर अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार ज्यान गुमाउनेहरुमा फिक्कल गाउँपालिका- २ का ५५ वर्षीया तीलमाया बिक, ६५ वर्षीय कुनमान तामाङ, ४० वर्षीया लक्ष्मी बिक, २५ वर्षीया अनिता महत र वडा नं. ३ की ३५ वर्षीया शान्तिमाया श्रेष्ठ रहेका छन्। दुर्घटनाका गम्भीर घाइतेहरु चालक मानबहादुर सुनुवार, गंगामाया बिक र दिपक श्रेष्ठलाई उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पठाइएको छ।
अन्य चार जना यात्रु सामान्य घाइते रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकदर्शन थापाले जानकारी दिए।
त्यस्तै, बीपी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका २ को कमेरेफाँटमा जन्ती बोकेको टिपर दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु भएको छ भने दर्जन बढी घाइते भएका छन् ।
रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका १ कठोरेबाट काभ्रेको तिमालतर्फ बेहुली लिएर जाँदै गरेको बा. ४ ख ९४३८ नं टिपर बुधबार राति दुर्घटना हुँदा तिमाल ९ की २२ वर्षीया कृष्णमाया माझी र १६ वर्षीया चुन्पाइ लामाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । धुलिखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा दुवैको मृत्यु भएको हो ।
गम्भीर घाइते तिमाल गाउँपालिका ९ का १२ वर्षीय दिनेश तामाङ र निरज माझीसहित ९ जनालाई उपचारका लागि वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर लगिएको र सामान्य घाइतेको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको समेत प्रहरीले जनाएको छ । टिपर चालक खड्क माझीलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाका बारेमा सोधपुछ भइरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षकले जानकारी दिए ।
कर्मचारिले स्वेच्छिक अवकास लिन नपाउने, आवेदन दिनेको प्रक्रिया रोकियो
काठमाडौं । सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय झापामा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली मंगलबार झापा जाने भएका छन । झापा विद्राेहका शहिदप्रति…
पोग्बाको निर्णायक गोलले फ्रान्स विजयी
कजान (एजेन्सी) । विश्वकप समूह ‘सी’को पहिलो खेलमा दाबेदारका रुपमा हेरिएको फ्रान्सले अष्ट्रेलियालाई २-१ ले हराएको छ । फ्रान्सको…